အ မွေ ဆိုင် ရာ( မေးပါရ စေ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Classifieds, Personal Ad. » အ မွေ ဆိုင် ရာ( မေးပါရ စေ )
Posted by Sine Sant on May 24, 2014 in Classifieds, Personal Ad. | 15 comments
အ မွေဆိုင် ရာ ကိစ္စ ဖြေ ပေးကြပါ
သိချင် တာလေးပါ ။
နောက်မိန်းမ တနည်း မယားငယ် အ နေနဲ့ သူ့ ခင် ပွန်းဆီကရပိုင်
ခွင့်ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာသိချင် ပါတယ် ။
နာမည်ပေးပြီး ပြောပါရ စေ ။
ဦးဘ မှာပထမ ဇနီးရှိတယ် တရားဝင် ကွာရှင်းပြီး ။
ပထမဇနီးနဲ့ သားသမီးတွေလည်းရခဲ့တယ် အားလုံးကလည်းအရွယ်
ရောက် အိမ်ထောင် ကျပြီး ။အ မွေတော့မခွဲရ သေးဘူး ။
နောက်ဒုတိယ ဇနီးနဲ့ ကျတော့ သားသမီးမရှိဘူး ။ တရားဝင် လက်
ထပ်ထားတယ် ။ ဒုတိယဇနီးက စီးပွားမရှာတတ်ဘူး ထားရာနေ
စေရာသွားဘဝ နဲ့ ပဲနေခဲ့ရတယ် ။ ပိုင် ဆိုင် မှုအားလုံးက ဦးဘ နာ
မည်နဲ့ ပဲရှိနေတယ် တကယ် လို့ ဦးဘ က ရုတ်တရက် သေဆုံး
သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် တရားဥဗ ဒေ အရ ဘယ်ဇနီးက ပိုပြီးခံစားခွင့်ရှိမလဲ ။ ဒုတိယဇနီး မှာလည်း အရင် ခင် ပွန်းနဲ့ က လေးတွေရှိခဲ့တယ် ။
အဲ့က လေးတွေငယ်ငယ်က တည်းက ယူခဲ့ကြတော့ အ ဖေနာမည်
မှာ ဦးဘ ဖြစ်နေမယ် ။ဒါဆို အဲ့က လေးတွေနဲ့ ပထမ ဇနီးရဲ့ က လေး တွေမှာဘယ် က လေးက အ မွေပိုင် ဆိုင် ခွင့် မှာဘယ်လို
ကွာခြားချက် ရှိမလဲ ။ ပထမ အိမ်ထောင် သက် နှစ် နှစ်ဆယ် ။
ဒုတိယ အိမ်ထောင် သက် က ဆယ် နှစ်ကျော်မယ် အိမ်ထောင်
သက်ကွာခြားချက် မှာရော သက်ဆိုင် မှုရှိနိုင် လား ။
ပြောရေးဆိုခွင့်မှာဘယ်သူကအားသာနိုင် မလဲ ။ဦးဘ ကဒုတိယ
ဇနီးအိမ်မှာ နေရင်းအသက်ဆုံးခဲ့မယ် ဆိုရင် ရော ကွာခြားချက် ရှိ
နိုင် လား ။
အဲ့ဒါ လေး သိချင် လို့ ပါ ဥဗ ဒေအ ကြောင်းနားလည်သူများ
ရှိရင် တစ်ချက် လောက် ရှင်းပြစေချင် ပါတယ် ။
ရွာထဲ အမတ်မင်း ရှိတယ်။
သူဖြေရှင်းပေးနိုင်မလားဘဲ။ :-))) jk
အမတ်မင်းရယ် ဖြေဖို့ နေနေသာ သာ ပို့(စ) ကို ရှာမတွေ့လို့တဲ့ အရီးရယ်။
ရွာထဲမှာလမ်းပိတ် အယ် လမ်းပျောက် နေတယ် ထင် ပါရဲ့ 
အခု ဦးဘမှ မသေသေးတာ..
မသေခင် တရားဝင် သေချာတိကျတဲ့ သေတမ်းစာရေးပြီး အမွေပေးထားပေါ့..။
ကိုကျော်စွာပြောသလို ဦးဘ ကအဲ့လိုခွဲပေးခဲ့ရင် ကောင်းတာပေါ့
သတင်းစာတွေထဲမှာ ရောအပြင် မှာပါ ဒီအ မွေပိုင် မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှုရင် ဆိုင် ရတာ
မ ကျေနပ်တော့ မောင် နှမအ ချင်းချင်း ရန်ငြိုးတွေနဲ့ သတ်ကြတယ် ဆိုတာတောင်
ကြားနေ ရတော့အ မွေဆိုတာမိသားစုကြားမှာအမျိုးမျိုးမွှေနေတော့တာပဲ
ကြောက်စရာကောင်းတယ် အဲ့အ မွေဆိုတာ
ပထမအိမ်ထောင်နဲ့ ကွာရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဦးဘသေရင် ဒုတိယမယား အကုန်ရပါတယ်။ အဓိက ကျတာက အမွေဟာ လက်ထက်ပွားလား၊ ပါရင်းလား၊ အထက်ပါလား၊ ဆိုတာပါ။ အခု ဦးဘနာမည်နဲ့ ဆိုတော့ ဦးဘသေရင် အသေချာဆုံးက ဒုတိယမယား ရပါတယ်။ လင်သေရင် လင့်အမွေ မယား အကုန်ရတယ်။ ဦးဘရဲ့ သြရသ သားသမီးက တရားစွဲဆို အမွေတောင်းမှ ၆ ပုံ ၁ပုံ တောင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ ဦးဘသေရင် ဒုတိယမယားရဲ့ သားသမီးတွေ (မယားပါသားသမီး) က အမွေဆက်ခံခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူလုပ်ချင်ရင် မယားပါသားသမီးကိုပဲ အမွေစားအမွေခံ မွေးလိုက်ရင် ပြတ်ပြီ။
အရေးကြီးတာ တစ်ခု ပြောပြမယ်။ ဘယ်တော့မှ တရားဥပဒေအတိုင်း မလုပ်ပါနဲ့။ တရားဥပဒေအတိုင်းလုပ်ရင် နစ်နာဖို့ များပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လျင်သူစားစတမ်းပါ။ အမွေဟာသိပ်မွှေတယ်။ အခု အမပြောတာ ဂရုစိုက်ပေးပါ။
– ဦးဘ မသေခင် ဂျင်နရယ်ပါဝါ ယူပြီး အပြီးအပိုင် စွန့်လွှတ်ပေးကမ်းခြင်းစာချုပ်နဲ့ ၃% အခွန်ဆောင်ပြီး လိုချင်တာ လုပ်ထားပါ။ ဦးဘကို သေတမ်းစာ မရေးပါစေနဲ့။ သေတမ်းစာ တရားမ၀င်လို့ပါ။ သေချာတာက ဦးဘသေရင် ဒုတိယမယား အများစုရမယ်။ ဦးဘနာမည်နဲ့ ရှိနေတာတွေထဲမှာ အထက်ပါပစ္စည်းတွေလည်း ရှိနေနိုင်တယ်။ ပါရင်းကနေ လက်ထက်ပွားလည်း ရှိနေနိုင်တယ်။ အမွေတစ်ခုကို အမျိုးအစားခွဲဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်ဘူး။ ဒါကို ထိန်းသိမ်းလာရတဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုတန်ဖိုး ဆိုတာလည်း ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကို မြန်မြန်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားပါ။ မတရားခံရရင်လည်း တစ်သက်စာ အောင့်သက်သက်နဲ့ ခံရမယ်။
ဒါကြောင့် ဦးဘ မသေခင် ရှေ့နေရှေ့ရပ်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး မြန်မြန်သွက်သွက် လုပ်ထားပါ။ ပေါ့ပေါ့ မနေကြပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
စာကြွင်း၊ ၊ တကယ်လို့ ဦးဘက ဂျင်နရယ်ပါဝါ စပါယ်ရှယ်ပါဝါ မလွှဲလိုဘူး။ သူချစ်တဲ့ သားသမီး သူယုံတဲ့ သားသမီးကိုသာ သူ့အမွေ လွှဲပေးလိုတယ်ဆိုရင် အဲဒီသားသမီးကို သူ့အမွေ(ဥပမာ အိမ်ဆိုပါတော့) ကို စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ တရားဝင်ပြန်ရောင်းလိုက်ပါ။ အဲဒါကျတော့ အခွန်က ၁၅ % ဆောင်ရမယ်။ မိဘက သားသမီးကို ပေးတာ အရောင်းအ၀ယ်နဲ့ ပေးသလို လုပ်တာမျိုးကို ပြောတာပါ ညီမ။
အခု ကိစ္စက ဦးဘ ရဲ့ သားသမီးတွေကို အဓိက ရင် ဆိုင် ရမှာပါ
သူတို့ အ ဖေဆိုတော့လေ အခ လက် ရှိပိုင် ဆိုင် ထားတာတွေက ဒုတိယဇနီးနဲ့ မှ
ပြန်ပွားတာပါ ဦးဘ လည်းလူလည်တစ် ယောက်လို့ ထင် ရတဲ့သူပါ
ခက်တာက ဒုတိယဇနီးအ နေနဲ့ လည်လည်ဝယ်ဝယ်မရှိတာပဲ
ဦးဘ ပြောသမျှယုံတယ် ခေါင်းလည်းမခါရဲဘူး ဒီတော့ ဘေးကမြင် နေရတဲ့ လူတွေ
ကကြားက နေ စိတ်ပျက်မိတာပေါ့
အခုလို စေတနာ ရှေ့ထား ပြောပြခဲ့တဲ့ အစ်မဝင်းပြုံးမြင့် ကိုကျေးဇူးတင် ပါတယ်
အမပြုံး ကျွန်တော်လဲ တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ မိန်းကလေး တစ်ယောက်က လင်ယောင်္ကျားဆုံးသွားတယ် နောက် နှစ်နှစ်လောက်နေတော့ ယောက်ခမ တွေကလဲ ရှေဆင့်နောက်ဆင့် ဆိုသလို ဆုံးပါးသွားကြတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ ယောက်ခမ တွေကျန်ခဲ့တဲ့ အမွေတွေကို ဘယ်လိုခံစားခွင့်ရှိပါလဲ။ ယောက်ခမ မှာလဲ သားသမီး ငါးယောက်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးကြောင်တေရင် လုလုဂလေးကို မြွေတွေအကုန် လွှဲဂဲ့မယ် အပူနဲ့.. ဒါဗေမဲ့ လုလုဂလေးရယ် ပထမနေရာဒေါ့ အဖြစ်နိုင်ဒေ့ါဗူး.. ကြေးမုံဂျီး ဦးသွားပီ.. သူဂ တရုတ်သဗုံဆိုတော့ ကြောက်ရသယ်…။
ကွန်မင့်ပြန်အ၀င် နောက်ကျတာ ဆောတီးနော်။ ဒီကေ့စ်မှာ ပြောစရာ အများကြီး ရှိနေပြီ။ အဓိကက ဥပဒေဟာကွက်ကြီး။ ဥပဒေကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်တင်းထားပေမယ့် အခု ဒီကေ့စ်ကို အမ ဥာဏ်မီသလောက် ပြန်ပြောမယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်လေးထားပေးပါ ညီမရေ။
ဥပဒေက နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ ရတဲ့ သားသမီးရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် ပထမအိမ်ထောင်က သြရသသားသမီးကို နောက်အိမ်ထောင်ရဲ့ လက်ထက်ပွားမှာ ၆ပုံ၁ပုံပဲ ရခွင့်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဖတ်ဖူးတာက ၃ပုံ၁ပုံအထိရတယ်လို့ သိရတယ်။ (အဲဒါက ပထမဇနီးနဲ့ မကွာရှင်းထားမှ) ။ ဦးဘရယ်၊ ဦးဘရဲ့ ပထမဇနီးကို ဒေါ်ပပ လို့ သဘောထား။ ဒုတိယဇနီးကို ဒေါ်ဒုဒု လို့ သတ်မှတ်ကြရအောင်။ ဒုတိယအိမ်ထောင် လက်ထက်ပွားမှာ ဒေါ်ပပရဲ့ သားသမီးတွေက ၆ပုံ၁ပုံ ပဲရမယ်။ ဦးဘနဲ့ ဒေါ်ဒုဒု မှာ သားသမီး မထွန်းကားဘူး ဆိုတော့ အများစုက ဒေါ်ဒုဒု ရပြီ။ အဲဒီတော့ ဒေါ်ဒုဒုရဲ့ ပထမအိမ်ထောင်က သားသမီးတွေ (မယားပါသားသမီး) က ဓမ္မတာအတိုင်း အများစုကို ရပြီပေါ့။ ဥပဒေက နှောင်းသားသမီးရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဒီလို ၆ပုံ၁ပုံ ကို ပြဌာန်းတယ်။ နှောင်းသားသမီး မထွန်းကားတော့ မယားပါသားသမီးတွေက အကျိုးကျေးဇူး ပိုဖြစ်ထွန်းသွားတယ်။ အဲဒီမှာ ဒေါ်ပပရဲ့ သားသမီးတွေအတွက် မတရားတော့ဘူး။
မြန်မာပြည်မှာက လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဘယ်သူ့ပေးပေး လုပ်လို့မရဘူး။ သေတမ်းစာ တရားမ၀င်ဘူး။ ခလေးကျတော့ မွေးချင်သလို မွေးလို့ရတယ်။ ဘယ့်နှယ့်ကြီးမှန်းကို မသိပါဘူး။
အခု လုလုအပြောအရ ဦးဘဟာ လည်လည်ဝယ်ဝယ် ရှိတဲ့လူဆိုတော့ သူ့ပစ္စည်းကို သူ့ဖာသာ စီမံခန့်ခွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ ဘေးကကြည့်နေရတဲ့ လုလုတို့ စိတ်ကိုလျှော့နိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ အချိန်တန်ရင် သွေးက စကားပြောတယ် လုလုရယ်။ ဦးဘဟာ သူ့သားရင်းသမီးရင်းတွေအတွက် တစ်ခုခု လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရ ဒေါ်ဒုဒုက အားသာပေမယ့် ဦးဘသာ ဥစ္စာပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့သဘောအတိုင်း လုပ်သွားတာလည်း တရားပါတယ်။
ပြီးတော့ ဆိုင်မဆိုင် မသိပေမယ့် ပြောပြချင်တယ်။ ပထမအိမ်ထောင်ပြို ကွဲပြီး အဖေက နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီဆိုရင် တကယ်ခံစားရတာက အိမ်ထောင်ကြီးက သားသမီးတွေ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အရမ်းခံစားရတယ်။ မတတ်သာလို့ မိဘဖြစ်နေလို့ ငြိမ်ခံနေလိုက်ကြရပေမယ့် ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ရှိသေးတော့ မယားပါသားသမီးတွေနဲ့ လင်ပါသားသမီးတွေ လူရှေ့သူရှေ့မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ဟန်ဆောင်ဆောင် ရင်ထဲက အမုန်းက မရဘူး။ မိဘသေတာနဲ့ သတ်ကြတော့မှာ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လက်တုန့်ပြန်ဖို့အတွက် အမွေကိစ္စမှာ အနိုင်ကြဲကြတော့မှာ။ တကယ်က အမွေမက်တာ အဓိက မဟုတ်ဘူး။ လက်တုန့်ပြန်လိုတဲ့ စိတ်။ အဲဒီစိတ်နဲ့ ရှေ့နေတွေကို နှစ်ပေါက်အောင် လုပ်ကျွေးကြလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဦးဘက သူမသေခင် ခွဲဝေ ပိုင်းခြားလုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုရင် ဒေါ်ဒုဒုဘက်က စိတ်လျှော့ပြီး လက်ခံလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဥပဒေတွေကိုက ပထမအိမ်ထောင်နဲ့ရတဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံစားမှုကို လုံးဝထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲ မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာလောက်ကိုသာ ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေဖြစ်နေတာကိုး။ (ဒါကတော့ မယားပြိုင်ဥပဒေကို စောင်းပြောတာပါ)
ဒေါ်ဒုဒု အနေနဲ့ ကိုယ့်အတွက် ကျန်ချင်တယ်ဆိုရင် ခုကတည်းက မရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လျှော့ချ၊ ရောင်းချပြီး အတွင်းပစ္စည်း ၀ယ်ထားတာ အမှန်ဆုံးပါပဲ။ ရွှေငွေ အတွင်းပစ္စည်းကတော့ လက်ဝယ်ရှိသူ ပိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ တောင်းလို့မရဘူး။
အိမ်လွမ်းသူရေ … ဒါကတော့ ဥပဒေကြောင်းအရ လွယ်လွယ်လေးပါ။ အဲဒီ မိန်းကလေးဟာ ယောက္ခမတွေရဲ့ အမွေ ၆ပုံ၁ပုံ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဥပဒေကြောင်းအရနော်။ လက်တွေ့အရ ပြောမယ်ဆိုရင် အဲဒီ မိန်းကလေးကို ယောင်းမတွေက ခွဲဝေပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မကျေနပ်လို့ တရားမမှုနဲ့ စွဲမယ်ဆိုရင် အောက်ထစ် သိန်း ၅၀ လောက်တော့ ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရ ဘယ်လောက်ပဲ ခိုင်မာခိုင်မာ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာ မတတ်သာကြပါဘူး။
ဥ ပ ဒေ အတိုင်းဆိုတကယ် ရှုပ်ထွေးတယ်နော်
ဒီအတိုင်းဆို ဒေါ်ပပ ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်နစ်နာသွားနိုင် တာပေါ့
ဒီကိစ္စ မှာနားလည်မှုထားဖို့ ဆိုတာမဖြစ်နိုင် လောက်ဘူး
အ မွေ ဆိုတာ တကယ်ကို မွှေ လွန်းတယ် နော်
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စိတ်ညစ် စရာပဲ
မကြီးပြုံးကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ် အ မွေဆိုင် ရာ ဥ ပ ဒေ
ရှင်းပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမပြုံးရေ။